Shiinaha bac qadada kartoo loogu talagalay carruurta Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > > Bac qadada > Bacda qadada ee carruurta
Biyo la’aan iyo adkeysi leh: cadeyn aan biyuhu lahayn iyo mid wasakh ah, oo fududahay in la nadiifiyo.
Boorsada qadada carruurta
1. Xidhmada ugu fiican ee qadada carruurta - si loo ilaaliyo caafimaadkaaga
(2) Biyo-la'aan iyo adkeysi leh: caddeyn aan biyuhu lahayn iyo wasakhda, fududahay in la nadiifiyo.Ka bacda waraaqaha qoyan iyo sanaadiiqda balaastigga ah ee daciifka ah, bacda qadada waa mid dib loo isticmaali karo oo dhulka u roon. Iska ilaali kaydinta heerkulka sare.
(3) Awood ballaaran: 29 * 19 * 14.5 cm, aad ugu habboon qadada dugsiga hoose iyo tamashlaha, kaamam, xeeb.
(4) Tayo sare oo fududahay in la nadiifiyo: Tolmada tolmada iyo shaqada tolista ayaa ka dhigan in boorsadani ay waarayso.
(5) Waxaan nahay samaystayaal kiish leh tayo macquul ah oo qiimo leh.Waxaan ku heli karnaa dhar / alaabo qiimaha ugufiican, qaasatan waqtiyada kaladuwan ee waaweyn ama kuwa caadiga ah.
(6) Waxyaabo tayo sare leh oo neoprene oo waara oo leh shaashad shaashad shaashad qurux badan iyo dahaadhka cuntada PEVA.
(7) Loogu talagalay oo loogu talagalay qurxinta gudaha oo qoto dheer, waxaa jira meel ku filan oo lagu qadeeyo qadada.
2. Xaddidyada alaabta ee boorsada qadada carruurta (faahfaahinta)
Biyuhu, dahaaran, la dhaqi karo
4. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsooyinka qadada ee caruurta
(2) Cabbirka cabbirka ee caadiga ah: 29 * 19 * 14.5CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 30CM X 40CM X 100CM. 40PCS / sanduuqa. Waxyaabaha dhagxaanta ah: K = K 5 lakab oo ah warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 11.8KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 10KG.
S10: Miyaad aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinta baaritaanka alaabta? Sidee ku saabsan tayada wax soo saarkaaga?
S11: Miyaad alaab geyn jirtay Amazon kahor?
S12: Aaway dekeddii ugu dhoweyd?
Calaamadaha kulul: Bacda qadada ee carruurta, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka